Akụkọ - ụbọchị 8 gbakọọ! S-conning na-akpọ gị òkù ka ị gaa Shanghai CPhI & P-MEC China!
P-MEC China, ihe ngosi mba ụwa na-ejikọ ndị na-eduga mba ụwa na ụlọ ọrụ ndị ama ama na mpaghara, ga-enwe na Shanghai New International Expo Center site na Disemba 16th - 18th 2020. N'ebe a, ị ga-ahụ ngwaahịa ọhụrụ nke ndị isi na-emepụta ngwa ọrụ na-eweta na ihe nkwakọ ngwaahịa, chọta ihe ngwọta maka nkwakọ ngwaahịa ngwugwu azụ.
Otu teknụzụ S-conning Ltd.
Booth Nke.: N1 E68
Oge ： 16th - 18th 2020
Ugbu ụdị: S400 elu na-agba ọgụgụ isi nzukọ & labeling usoro prefilled disposable sirinji, akwu-wepụ, oriọna nnyocha na echekwa n'elu ikpo okwu.
N'oge a ụwa na-ata ahụhụ na COVID-19, na mkpa ngwa ngwa nke ọgwụ mgbochi COVID-19, S-conning kwalitelarị teknụzụ nke ntinye sirinji e mere ka ọ rụọ ọrụ, mee ka nkwụsi ike nke arụmọrụ rụọ ọrụ, kwenyesie ike na mmepụta nke nnukwu ọgwụ na-emepụta ọgwụ, na-eme ihe ọrụ dị mkpa na mmepụta nke ọgwụ mgbochi COVID-19 n'oge pụrụ iche.
Modelsdị ndị dị ugbu a: S308 rotary vetikal round bottle Machine (Cartridges)
Ngwaahịa ọ bụla na ụdị ọ bụla sitere na S-conning nwere nkwanye ùgwù anyị maka Science Science, yana ịhụ n'anya na teknụzụ, njikwa anyị na njikwa igwe yana nkwa anyị na nchekwa onye ọrụ. N'ime ihe ngosi a, S-conning ga-eweta ụdị ngwaahịa dị iche iche iji mee ka anyị nwekwuo uru onwe anyị, ọ bụkwa oge opupu ihe ubi maka ọnụnọ mba ụwa.
S-conning Technology Group Ltd, bụ otu n'ime ndị kasị ọkachamara ígwè emeputa, guzosie ike na 2010, akpan-agba mbọ ka High-ọgwụgwụ ahaziri Industrial akpaaka na smartization.
Isi ụlọ ọrụ dị na Guangzhou Science City. The factory-ekpuchi ebe ndị 5200 square mita, na ala ụlọ ọrụ na gburugburu ebe obibi na saa mbara mmepụta noo. Site na asambodo asambodo ISO9001 na asambodo CE, anyị bụ ndị mwekota na: mmepụta, nyocha na mmepe, ọrụ ahịa na ahịa mgbe a na-ere ahịa, anyị na-enye ọtụtụ mbupụta ọgụgụ isi / ngwugwu nwere ọgụgụ isi na ọrụ ahaziri iche maka ọgwụ, kemịkalụ kwa ụbọchị, nri, kemịkal, kọmputa, na ụlọ ọrụ ụtaba.
S-conning tech karịa afọ 10 nke na-aga n'ihu, Na-elekwasị anya na arụmọrụ nke akụrụngwa akụrụngwa, site na nsuso UEO (njirimara onye ọrụ kachasị mma), ma na-emeziwanye atụmatụ na izu oke nke ngwaahịa; ihe ohuru na-adigide, nhazi nke mba uwa, S-conning enwetawo otutu ihe eji emeputa ihe na ihe omuma, ihe ndi mmadu juputara na sirinji na igwe eji ede ihe na igwe nkpuchi. nye ngwaahịa kachasị mma na ọrụ ahịa a na-ere ahịa mgbe emesịrị ndị ọrụ njedebe anyị bụ nchụso ebighi ebi nke S-conning na-ezute mgbe niile atụmanya na mkpa nke ụlọ ọrụ ahụ.
Plastic akara igwe, Top na ala Labeler, Sirinji Syringe na nyocha usoro, Commercial Bottle Labeling Machine, Label Printer N'ihi Ngosiputa ite karama, Label Applicator Machine N'ihi igbe,